I-china DuoDuo Shopping Cart DG2035 Metal Utility Trolley Dolly nomakhi weSihlalo ogoqekayo | UDuoduo
Inqola Yokuthenga ye-DuoDuo DG2035 Metal Utility Trolley Dolly eneSihlalo Esigoqekayo
Usayizi womkhiqizo: 90x35x55CM
Isikhwama Usayizi: 54.5 × 32.5x22CM
Usayizi weCarton: 88x35x53CM
Izinto zesikhwama: i-polyester 600D PVC
Inqola yokuthenga enesihlalo, ikhwalithi ephezulu, engasindi enefreyimu egoqekayo, eshaweni esindayo yensimbi yesikhwama sendwangu engu-600D oxford, esefashinini futhi esenza imisebenzi eminingi, kungumsizi omuhle empilweni yakho yansuku zonke.
Ukusetshenziswa okuningi. Yisebenzise njengenqola yokuthenga, inqola yokuthenga, inqola yokusetshenziswa, inqola egoqekayo, kanye nenqola ephelele eyehlukile emasondweni ngaphandle komhlangano odingekayo; Susa isikhwama bese iba yi-dolly engasindi ekwazi ukuthwala.
Iyagoqeka futhi iyaphatheka. Isonga kalula phakathi nendawo ukuze igcinwe lapho ingasetshenziswa; Gcina esiqwini semoto yakho, ngaphansi kombhede, ekhabethe noma egalaji.
Kuqukethe amakamelo ayi-7 okugcinwa kuwo, afaka umnikazi wesiphuzo, iphakethe le-flap ngaphambili, isikhwama sangaphakathi, iphakethe langemuva nokuningi; Izinto zakho ziya lapho uya khona.
Njenganoma iyiphi enye inqola eneSeat emakethe, iTrolley Dolly eneSeat iqukethe isiguqo sezihlalo esinamagwebu nesixhasi sangemuva ukuze ukwazi ukuphumula uma ukhathele.
I-Leisure Shopping Trolley ene-Fold Down Seat inikeza umsebenzisi indawo yokubeka nokugcina lapho ehamba, futhi inikeza isikhala sokuphumula uma kudingeka. Isikhwama se-microfibre fabric trolley sinesayizi ophanayo futhi siqine ngokwanele ukubamba isisindo. Uma umsebenzisi edinga ukuphumula kunokuhlala phansi esihlalweni esiqinile esingemuva kohambayo. Indwangu ethambile inenani elincane elakhelwe ku-flex eliqinisekisa indawo yokuhlala kahle. Zombili izinhlobo ezinamasondo amabili nezintathu zeLeisure Shopping Trolley eneFold Down Seat ziyatholakala.
Langaphambilini Inqola yokuthenga ye-DuoDuo DG1026 / DG1027 enamasondo angama-360 ° Rolling Swivel
Olandelayo: I-DuoDuo Folding Platform Trolley HC150A / 250A Egoqekayo Yesitoreji Esilula Esihambisa Ipulatifomu Yesandla Samaloli
Inqola Yokuthenga Yezitolo
Inqola Yokuthenga Esindayo
Inqola Yokuthenga Encane
Inqola Yokuthenga Ephathekayo
Inqola Yokuthenga Eyi-Rolling
Inqola Yokuthenga Enamasondo Amabili Aguqukayo
Inqola Yokuthenga Enebhasikidi Oversized
Izinqola Zokuthenga Ezincane
I-DuoDuo HC150BXG 250BXG Ukuhambisa Ipulatifomu Yesandla Samaloli
Inqola yokuthenga ye-DuoDuo DG1005 ene-Wate Esusekayo ...
Heavy Duty Hand Truck LH5002 Nge Extra Esikhulu ...
Inqola Yokuthenga ye-DuoDuo DG1004 ene-Tri-WH ...